I-Cottage emnandi eziqukethwe - I-Airbnb
I-Cottage emnandi eziqukethwe
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Irene
I-Fleetwood cottage itholakala imizuzu eyi-7 ukuhamba ibanga ukusuka edolobhaneni laseSt John ogwini olusenyakatho yesiqhingi.
Ikakhulu umphakathi wasemakhaya, isifunda esihle saseSt John sinendawo encane yezitolo, kanye ne-pub yasesigodini, ezungeze isonto laso lesifunda kanye nehholo lesifunda.
Amawa ogwini olusenyakatho anikeza ukubukwa okuhle kakhulu eJersey. Le ngxenye yesiqhingi ilungele ukuhamba ngezinyawo ezindleleni zamawa kanye/noma emaphandleni kanye
itheku elihle laseBonne Nuit, imizuzu ukusuka edolobhaneni, likufanele ukuvakashelwa.
Yize inamathiselwe endaweni enkulu, i-Fleetwood cottage inomnyango wayo wangasese onikeza ukufinyelela emhubheni ekuholela endlini yokugezela, ikhishi / indawo yokudlela. Omunye umhubhe ukuholela ekamelweni lokulala kanye nendawo yokuphumula/i-TV/isidlali somsakazo we-CD nesidlali se-DVD ngisho neqoqo lama-CD ne-DVD ukuze ujabulele. Kukhona nombhede osofa abangani abangase bangafisi ukuhlala ngombhede ofanayo. Ikotishi lihlome kahle ngohhavini/igrill/ 4 hobs, imicrowave, iketela, itoaster, ifriji nomshini wokuwasha kanye nehhashi lezingubo elitholakalayo. Ezinye izincwadi nemidlalo nakho kukhona onakho ukuze ujabulele.
I-Fleetwood cottage nayo inendawo yayo yokupaka kanye nendawo ye-patio.
Izivakashi zithola ubhasikidi wokwamukela wesizotha ukuze uhlale ubusuku obungu-7 noma ngaphezulu. Elinye ikhofi netiye nakho kushiywe onakho.
Sisahamba imizuzu embalwa ukusuka edolobhaneni lase-St John futhi sifinyelela kalula emigwaqweni enamaqabunga nezindlela zamawa ogwini oluhle olusenyakatho. Sizungezwe amasimu lapho ungabona khona izinkomo zethu ezidumile zaseJersey. Idolobhana laseSt John liyimizuzu eyi-7 yokuhamba ibanga ukusuka ekotishi lapho ungathola khona indawo yokucima ukoma, izitolo zokudla (kufaka phakathi isitolo sokudla se-MS), ibhula, isonto, isikole, indawo yokwenza izinwele kanye nesaluni yobuhle, udokotela kanye nodokotela wamazinyo abazijwayeza. ihholo lepherishi.
Incwadi ebizwa ngokuthi "Discovering Jersey" ehamba ngezinyawo ezingu-30 enemininingwane yomlando othakazelisayo wempilo yase-Island phakathi neminyaka izobolekwa ngomusa ngesikhathi uhlala. Nokho singalindela ukuthi incwadi njengazo zonke ezinye izincwadi nezinto ezibonakalayo zisale zisesimweni esihle ngemva kokuhamba kwakho ukuze abavakashi bamaholide bakusasa bazijabulele.
Incwadi ebizwa ngokuthi "Discovering Jersey" ehamba ngezinyawo ezingu-30 enemininingwane yomlando othakazelisayo wempilo yase-Island phakathi neminyaka izobolekwa ngomusa ngesikhat…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$249.